WhatsApp တွင်လိမ်လည်မှု (သို့) ဗိုင်းရပ်စ်များမကျရောက်ခြင်း Androidsis
အက်ဒါဖာရီနို | | လုံခွုံရေး, Whatsapp
WhatsApp သည်လက်ရှိတွင်တစ်ခုဖြစ်သည် လိမ်လည်မှုများ၊ လိမ်လည်မှုများနှင့်သတင်းမှားများပျံ့နှံ့စေသည့်အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လျှောက်လွှာကိုယ်နှိုက်သိသည်။ ဒီအကြောင်းကြောင့်သူတို့ဟာခဏတာအစီအစဉ်တွေလုပ်နေတယ်။ မက်ဆေ့ခ်ျကို forwarding ကိုကန့်သတ်ဖို့ကိုဘယ်လို မကြာခင်လာလိမ့်မယ် များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သည်၎င်းသည်လိမ်လည်မှု (သို့) ဗိုင်းရပ်စ်သည်ဖုန်းထဲသို့ခိုးယူရန်ကြိုးစားနေခြင်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်သည်။
ဖြစ်ရပ်များစွာတွင်ကတည်းက WhatsApp မှတဆင့်ပျံ့နှံ့သွားသောဤလိမ်လည်မှုများသည်များစွာသောရှုထောင့်များစွာရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောရှုထောင့်များကိုအာရုံစိုက်လျှင်အသိအမှတ်ပြုပါ။ ယခင်ကသင်သည်ဤသတင်းစကားများထဲမှတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ဖူးပြီး၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိမရှိကိုသင်ပြောနိုင်သည်။
Google သည်ယခုအပတ်တွင်ဂိမ်းတစ်ခုစတင်ခဲ့သည် မက်ဆေ့ခ်ျ phishing လျှင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အရာနှင့်အတူ။ ဒီသဘောနဲ့အဲဒီဂိမ်းလိုပဲ သငျသညျသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှုထောင့်ကိုကြည့်ဖို့ရှိသည် ဒီမက်ဆေ့ခ်ျထဲမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို WhatsApp ကိုပို့။ ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်မည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်လိမ်လည်မှုဖြစ်ကြောင်းချက်ချင်းသိရှိနိုင်မည်။
1 WhatsApp ရှိဗိုင်းရပ်စ်များကိုစစ်ဆေးပါ
2 WhatsApp အပေါ်လိမ်လည်မှုကို detect
အများဆုံးကိစ္စများတွင်ကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းတွင် link တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူအတွက်၎င်းအားနှိပ်ရန်ရွေးချယ်ထားသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ် malware သည်စက်ထဲသို့ ၀ င်သွားသည်။ အများအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာမက်ဆေ့ခ်ျကိုအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အချို့မျှမျှတတဘုံပုံစံများကိုလိုက်နာလေ့ပေမယ့်။
ကိစ္စရပ်တော်တော်များများမှာသူတို့ဟာကမ်းလှမ်းချက်တွေ (သို့) ပရိုမိုးရှင်းတွေအကြောင်းပြောကြတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီမြှင့်တင်ရေးကိုသင်အခွင့်ကောင်းယူချင်ရင် (များသောအားဖြင့်ဖြစ်ဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့) သင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ link ကိုနှိပ်ပါသီအိုရီအရသင့်အားမေးခွန်းတစ်ခုကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ပို့ပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤသည်မှာအားလုံးဖြစ်ပျက်မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်ပြသထားသော link ကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်ရရှိနိုင်သောအမျိုးမျိုးသောအခမဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်လည်းပြုလုပ်သည်။
နောက်လတ်တလောနောက်ထပ်တစ်ခုမှာသင်သည်သင်သည် WhatsApp ခေါ်ဆိုမှုလွဲချော်နေပြီဟုသင့်အားပြောသောစာဖြစ်သည်။ သင်နားထောင်လိုလျှင်ပူးတွဲပါလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့လွဲချော်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုလျှင်၊ ကျနော်တို့ကိုယျ့ကိုယျကိုအကြောင်းကြားစာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုပါကလျှောက်လွှာသည်ဤသဘောမျိုးဖြင့်အသိပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စမှာသော့ချက်ကအခြေအနေမှာအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မရှိသေးတဲ့စကားပြောဆိုမှုတစ်ခုပို့လျှင်ပေါ့။ ဒါ့အပြင် ဒီ app ကသံသယဖြစ်ဖွယ်လင့်ခ်များကိုရှာဖွေပေးသည်.
WhatsApp အပေါ်လိမ်လည်မှုကို detect
အခြားတစ်ဖက်တွင်, WhatsApp တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်လိမ်လည်မှုများစွာကိုတွေ့ရှိရသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည် messaging app မှတဆင့်မြန်ဆန်စွာတိုးချဲ့နေသောကွင်းဆက်မက်ဆေ့ခ်ျများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်တူညီသောမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတူညီသောပုံစံများဖြစ်သော်လည်းထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ အကယ်စင်စစ်သင်သည်ထိုသူတို့ကိုသိသို့မဟုတ်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ကိုလက်ခံရရှိပါပြီ။
ဖြစ်ကောင်းအချိန်နှင့်အမျှဆက်လက်ပေါ်ထွက်လာသောလူသိအများဆုံးသို့မဟုတ်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်ကောင်း, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ WhatsApp ကိုငွေပေးချေမည်သို့မဟုတ်သင်အရောင်ပြောင်းနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်၊ အကယ်လို့သင်ကဒီမက်ဆေ့ခ်ျကိုသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်တွေဆီပို့လိုက်ရင်၊ အဲဒါဟာအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ် (သို့) အရောင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မှော်အားဖြင့်။ လူသိများတဲ့လိမ်လည်မှု, ဒါပေမယ့်အသုံးပြုသူများအများအပြားကျဆင်းဆက်လက်စောင့်ရှောက်သော။
... တဖန်လာ #နောက်ပြောင်လိမ်လည်သည် မင်းဒါကိုပေးရမယ် #WhatsApp, ဒါပေမယ့်သင်မက်ဆေ့ခ်ျကို forward လျှင်သူကအပြာပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်အခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည် ... (ဒါကဒဏ္levelာရီအဆင့်ပင်ပန်းမှု)
ဘာလဲ @WhatsApp အစိမ်းပဲ (ငါတို့လို?)#Nopiques# NoReenvíes pic.twitter.com/Zq9HPCmD3M
- မြို့ပြအစောင့်တပ်ဖွဲ့ ?? (@Civil Guard) နိုဝင်ဘာလ 15, 2018
ပြီးရင်အဲဒီသံကြိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့တယ်ကမ္ဘာ၏နိဂုံးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ သော်လည်းကောင်း၊ လမ်းများပေါ်တွင်ခြိမ်းခြောက်နေသောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောရာဇ ၀ တ်ဂိုဏ်းများအကြောင်းပြောဆိုသော၊ လူတို့အတွက်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုကိုဖန်တီးရန်ကြိုးပမ်းသည်။ သူတို့သည်လူမှုကွန်ယက်မှတဆင့်ကြီးမားသောမြန်နှုန်းဖြင့်ချဲ့ထွင်နိုင်သည့်ချည်နှောင်မှုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကအဖြစ်မှန်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အမျှ WhatsApp လိမ်လည်မှုနှင့်ပတ်သက်။ အများအပြားအခမဲ့ထုတ်ကုန်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရှာပါအထူးလျှော့စျေးသို့မဟုတ်ပရိုမိုးရှင်းနှင့်အတူ။ ဤရွေ့ကားကမ်းလှမ်းမှုများ, အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကတိပေး, သူတို့ခဲ (သူတို့မဟုတ်သောကြောင့်) အမှန်တကယ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ရည်ရွယ်ချက်မှာအသုံးပြုသူများသည်ကိုက်ခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်လိုက်သည့်သက်ဆိုင်သည့် link ကိုနှိပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်အမြဲတမ်းဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်ပါ၊ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သောလိမ်လည်မှုများဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စများတွင်အရေးကြီးသောအရာသည်သာမန်အသိဥာဏ်ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် WhatsApp စာတိုများမှတဆင့်မြှင့်တင်ရန်မဟုတ်ပါ။ လျှောက်လွှာကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ တကယ်တော့ကြော်ငြာကိုဒီရှောင်ရှားရန်မိတ်ဆက်ကြသည်, နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုတဆင့်ပို့ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုငါ app ရဲ့အရောင်ကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ်အခမဲ့လုပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Whatsapp » WhatsApp တွင်လိမ်လည်မှုများ (သို့) malware များကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲ
Nokia5(2017) သည် Android Pie ကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်
Instagram မှထွက်ရန် Android applications များ